Iindaba - Ezinye iingcebiso malunga neWPC
Imveliso yeplastiki yeplastiki (WPC) iyonwabela izinto zomthi kunye nezinto zepolymer, kodwa isimahla kwiziphene zazo.Izinto zeWPC ngamandla aphezulu, kuthintela ukubola, ukumelana nemozulu, ukumelana nesiliphu.Ingasetyenziselwa ukubukeka komhlaba, igadi, izindlu. Ngobuchule obuninzi obuninzi, abantu abaninzi nangakumbi basebenzisa izixhobo zeWPC ukuhombisa indawo yabo.Kodwa uyazazi iingcebiso malunga nemveliso yeWPC?
1. Abanye abathengi bafuna kakhulu ukufumana i-WPC decking bakuba be-odolo. Ungabi namonde kumhlobo wam othandekayo, umzi-mveliso we-WPC ufuna ixesha lokuvelisa i-WPC decking.So musa ukutyhala umzi mveliso ukuvelisa iibhodi zakho ze-WPC ngokukhawuleza, Ukuba izinto ezingafunekiyo zikhutshiwe ngokukhawuleza okukhulu, iipropathi zoomatshini ze WPC nokwadala Kodwa ayithethi loo nto, icotha ngakumbi kwaye ikumgangatho ongcono.
2. Njengoko sisazi, iimveliso zethu ze-WPC zinokuphinda zisebenze ngokutsha kwaye zenziwe ngokusingqongileyo.Ngoko ke mhlawumbi abanye abathengi baya kuzikhathaza ngomgangatho wekhwalithi yethu.Sizinikele kuwe ukuba asisokuze sisebenzise izinto ezinokuphinda zisebenze. Yonke iodolo yethu, siya kusebenzisa izinto ezintsha kwaye siya kuvavanya izinto xa sithenga loo nto.Nje ngolu hlobo, sinokuqinisekisa ukuba umgangatho olungileyo we-WPC wokudibanisa.
Ingxaki exhaphakileyo kwiimveliso ze-WPC iyaphela.Njengemozulu ekhethekileyo, njengokukhanya kwelanga okuphezulu okwenza zonke iimveliso kube lula ukuphulukana nombala wazo. Ukuba ilizwe lakho linemeko efanayo, kufuneka uxelele umzi-mveliso wethu. ukongezwa kokumelana ne-UV ngakumbi, kuyakwenza ukuba iibhodi ze-WPC ziphele ngakumbi ukumelana.Akukhathaliseki nokuba yeyiphi imeko, iimveliso zethu zinokugcina umbala ubuncinci iminyaka emi-5 ukuya kweli-10, Esi sisakhono esihle kakhulu.
Ke ngoku malunga nokondla kwakho malunga nokuhonjiswa kwe-WPC yethu ngokudibanisa? Ukuba awukwazi ukulinda ukufumana umgangatho wakho weplastiki owenziwe ngomthi, khawulezisa uqhagamshelane nathi!
WPC decking edityanisiweyo, WPC decking ngaphandle, WPC decking umgangatho, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC nokwadala,